ဘေးဘောင်မှာ လက်ဗွေဖတ်စနစ်ပါလာမယ့် GalaxyJ6 Plus နဲ့ J4 Plus | Myanmar Mobile App
Home Trending Smartphone ဘေးဘောင်မှာ လက်ဗွေဖတ်စနစ်ပါလာမယ့် GalaxyJ6 Plus နဲ့ J4 Plus
Samsung အနေနဲ့ flagship series လို့သတ်မှတ်နိုင်တဲ့ ဖုန်းမော်ဒယ် ၂မျိုးရှိပြီး သူတို့ကတော့ Galaxy S နဲ့ Note series တွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ထပ် စီးရီးဖုန်းတွေကတော့ mid-end ကိုရည်ရွယ်ပြီး ထုတ်လုပ်ပေးလျက်ရှိ နေပါတယ်။
အခုဆိုရင် ကိုရီးယားကုမ္ပဏီဟာ အလယ်အလတ်ဆင့် စမတ်ဖုန်းတွေကိုပါ လုပ်ဆောင်ချက်ခပ်မြင့်မြင့်တွေ သုံးပြီး ထုတ်လာပါပြီ။ အဲ့ဒါတွေကတော့ Galaxy A နဲ့ J စီးရီးဖုန်းတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ရက်က ထွက်လာတဲ့သတင်းမှာဆိုGalaxy A7(2018) ကို နောက်ကျောဘက် ကင်မရာ ၃လုံးနဲ့ ထုတ်ထားတာကို တွေ့ရပါတယ်။
ဒီနေ့မှာတော့ Galaxy J6 Plus/Galaxy J4 Plus ဖုန်းတွေမှာ ပါဝင်လာမယ့် လုပ်ဆောင်ချက်တွေ ထွက်လာပါတယ်။ ဖုန်းသစ်ဖြစ်တဲ့ Samsung Galaxy J6 Plus မှာထူးခြားချက်အနေနဲ့ ပုံမှန် လက်ဗွေဖတ်စနစ်ကနေ သွေဖယ်ပြီး side fingerprint sensor ကိုသုံးလာမယ်လို့ သိရပါတယ်။ အဲ့လို လက်ဗွေဖတ်စနစ်မျိုးကို A7(2018) မှာလည်း သုံးထားပါတယ်။ J6 Plus ဖုန်းကို 3GB/4GB memory တွေနဲ့ဖြစ်ပြီး 32GB/64GB storage ပေးလာမှာပါ။
နောက်ကျောဘက်မှာ ကင်မရာ၂လုံးတပ်ဆင်ထားမှာဖြစ်ပြီး မျက်နှာပြင် 6-inch 18.5:9 display နဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိုဆက်ဆာပိုင်းမှာတော့ Qualcomm Snapdragon 425 ကိုသုံးလာဖို့ ရှိပြီး 3,300mAh ဘက်ထရီ စွမ်းအားနဲ့ ထွက်လာမှာပါ။
low-end ဖုန်းလို့ ဆိုနိုင်မယ့် Galaxy J4 Plus မှာတော့ fingerprint recognition လုပ်ဆောင်ချက် ထည့်သွင်းထားမှာ မဟုတ်ပဲ face unlock နည်းပညာထောက်ပံ့လာမယ်လို့ သိရပါတယ်။ 2GB/3GB memory + 16GB. /32GB storage နဲ့ဖြစ်ပြီး microSD slots နဲ့အတူ dual SIM card slots ပါဝင်ပါလိမ့်မယ်။ ဈေးနှုန်းနဲ့ ရရှိမယ့် အချိန်ကိုတော့ မသိရသေးပါဘူး။
Samsung အနနေဲ့ flagship series လို့သတျမှတျနိုငျတဲ့ ဖုနျးမျောဒယျ ၂မြိုးရှိပွီး သူတို့ကတော့ Galaxy S နဲ့ Note series တှပေဲ ဖွဈပါတယျ။ နောကျထပျ စီးရီးဖုနျးတှကေတော့ mid-end ကိုရညျရှယျပွီး ထုတျလုပျပေးလကျြရှိ နပေါတယျ။
အခုဆိုရငျ ကိုရီးယားကုမ်ပဏီဟာ အလယျအလတျဆငျ့ စမတျဖုနျးတှကေိုပါ လုပျဆောငျခကျြခပျမွငျ့မွငျ့တှေ သုံးပွီး ထုတျလာပါပွီ။ အဲ့ဒါတှကေတော့ Galaxy A နဲ့ J စီးရီးဖုနျးတှပေဲ ဖွဈပါတယျ။ ပွီးခဲ့တဲ့ရကျက ထှကျလာတဲ့သတငျးမှာဆိုGalaxy A7(2018) ကို နောကျကြောဘကျ ကငျမရာ ၃လုံးနဲ့ ထုတျထားတာကို တှရေ့ပါတယျ။
ဒီနမှေ့ာတော့ Galaxy J6 Plus/Galaxy J4 Plus ဖုနျးတှမှော ပါဝငျလာမယျ့ လုပျဆောငျခကျြတှေ ထှကျလာပါတယျ။ ဖုနျးသဈဖွဈတဲ့ Samsung Galaxy J6 Plus မှာထူးခွားခကျြအနနေဲ့ ပုံမှနျ လကျဗှဖေတျစနဈကနေ သှဖေယျပွီး side fingerprint sensor ကိုသုံးလာမယျလို့ သိရပါတယျ။ အဲ့လို လကျဗှဖေတျစနဈမြိုးကို A7(2018) မှာလညျး သုံးထားပါတယျ။ J6 Plus ဖုနျးကို 3GB/4GB memory တှနေဲ့ဖွဈပွီး 32GB/64GB storage ပေးလာမှာပါ။
နောကျကြောဘကျမှာ ကငျမရာ၂လုံးတပျဆငျထားမှာဖွဈပွီး မကျြနှာပွငျ 6-inch 18.5:9 display နဲ့ဖွဈပါတယျ။ ပရိုဆကျဆာပိုငျးမှာတော့ Qualcomm Snapdragon 425 ကိုသုံးလာဖို့ ရှိပွီး 3,300mAh ဘကျထရီ စှမျးအားနဲ့ ထှကျလာမှာပါ။
low-end ဖုနျးလို့ ဆိုနိုငျမယျ့ Galaxy J4 Plus မှာတော့ fingerprint recognition လုပျဆောငျခကျြ ထညျ့သှငျးထားမှာ မဟုတျပဲ face unlock နညျးပညာထောကျပံ့လာမယျလို့ သိရပါတယျ။ 2GB/3GB memory + 16GB. /32GB storage နဲ့ဖွဈပွီး microSD slots နဲ့အတူ dual SIM card slots ပါဝငျပါလိမျ့မယျ။ ဈေးနှုနျးနဲ့ ရရှိမယျ့ အခြိနျကိုတော့ မသိရသေးပါဘူး။
Previous articleအောက်တိုဘာ ၄ရက်နေ့မှာ စမတ်ဖုန်းသစ်မိတ်ဆက်သွားမယ့် HMD Global
Next articleကင်မရာ ၃လုံးတပ်ဆင်လာမယ့် Galaxy S10 ကို ဗားရှင်း ၃မျိုးနဲ့ ထုတ်လာနိုင်